नेपाल फेष्टिवल नागोयामा जे देखियो (फोटोहरुसहित) - Nepal Japan
नेपाली समय : 03:09:09
जापानी समय : 06:24:09
नेपाल फेष्टिवल नागोयामा जे देखियो (फोटोहरुसहित)
18 June, 2019 20:29 |जापान | comments | 137400 Views
– कविकिरण न्यौपाने –
नेपालको कुनै गाउँ वस्ती होइ , सात समुद्रपार व्यस्त शहरमा मध्यान्न एकाएक पञ्चेवाजा घन्कियो । के नेपाली, के विदेशी सवैको ध्यान गुन्जिरहेको पञ्चेवाजामा नै थियो ।
यो दृश्य गत शनिवार र आइतवार जापानको नागोयामा पहिलो पटक आयोजना गरिएको नेपाल फेष्टिवलको हो । वाजासंगै जापानका लागि नेपाली राजदूत प्रतिभा राणा लगायतले ताली बजाइरहनु भएको थियो भने एनआरएनए आईसिसि अध्यक्ष भवन भट्ट लगायत भिडमा नाचिरहेका थिए ।
उक्त मनमोहक दृश्यको जापानी लगायत विदेशीहरु फोटो अनि भिडियो खिच्‍न व्यस्त देखिन्थे । उक्त पञ्चेवाजा नागोयामा पहिलो पटक एनआरएन नागोयाका संयोजक दिपक कार्कीले आफ्नो व्यक्तिगत खर्चमा व्यवस्थापन गर्नु भएको थियो ।
त्यतिमात्र होइन नेपालका प्रायः जातजातिका भेषभूषामा सजिएका युवा युवतीहरु, विविध नेपाली सांगीतिक कार्यक्रम, नेपाली बाटुले घर, नेपाली सामानका स्टल तथा खानाहरू, जताततै नेपाली झण्डा फहराइरहेका यी सबैको समिश्रणले नेपाल फेस्टिवल मात्र नभई एउटा लिटिल नेपालकै झल्को दिन्थ्यो । पञ्चेवाजा वच्नसाथ नाच्न तम्सिहाल्ने नेपाल फेष्टिवलका सहसंयोजक यम खत्री भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो फेष्टिवल पहिलो हो तर अन्तिम होइन । अव हामी सबैको सहकार्यबाट प्रत्येक वर्ष अझ वृहद नेपाल फेष्टिवल गर्छौं ।
नागोयामा नेपाल फेष्टिवल सुरु (फोटो फिचर)
फेष्टिवल भव्य अनि सभ्य तरिकावाट सम्पन्न भएपछि आयोजकले सबैलाई प्रेस विज्ञप्ति मार्फत धन्यवाद दिएका छन् । कार्यक्रम संयोजक पारशमणि पोखरेलले आफ्नो फेसबुकबाट पनि यो स्टाटस पोष्ट गर्नु भएको छ। “यो नागोयाबासी नेपालीहरुको लागि ठूलो चुनौती थियो । कार्यक्रम भब्य र सभ्य भयो ! मलाई दिएको संयोजकको भुमिकामा आफ्नो प्रयास अन्तिम सम्म जारि राखे ! हामीलाई सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद ! “おつかれ様でした。
मातृभूमि छोडेर कर्मभूमिमा धेरै यस्ता नेपाल र नेपाली चिनाउने कार्य प्रसंशानीय त अवश्य नै छ तर पनि कार्यक्रम सम्पन्न गर्न कहाँबाट केकति रकम सहयोग प्राप्त र कति खर्च भयो भन्ने बारेमा जनमानसमा यदाकदा थाहा नगराइदा आलोचना समेत हुने गर्छ । यस फेष्टिवलको भने छिट्टै आम्दानी तथा खर्च विवरण सार्वजनिक गरिने कार्यक्रमका आर्थिक संयोजक मोहन खत्रीले बताउनुभएको छ ।
यस्ता कार्यक्रमहरु आयोजना गर्दा जानेर वा नजानेर यदाकदा गल्ती हुने गर्छन् । यस फेष्टिवलमा पनि केहस् कुरामा ध्यान नगएको देखिन्थ्यो । ट्वाइलेटमा जताततै वियरका क्यानहरू ढलेका देखिन्थे । आयोजकले माईकबाट फोहर (गोमी) तोकिएको ठाउँमा फ्याल्नु हुन अनुरोध गरिरहेका थिए । कार्यक्रम सकिएपछि कार्यक्रम संयोजक पारशमणि पोखरेल, एनआरएन नागोयाका संयोजक दिपक कार्की, सचिव श्याम शितल लगायत स्वयंसेवकहरु फोहर संकलन गरिरहेका देखिन्थे । भोलिपल्ट पनि कार्यक्रम स्थलमा आयोजकहरु सरसफाईमा जुटेका थिए ।
फेष्टिवलमा एनआरएनएको चुनावको प्रचार
एनआरएनएको अधिवेशन नजिकिदै जादाँ सदस्यता बनाउने कार्यले तिव्रता पाएको थियो । कोही सदस्यता बनाउन कन्भिस गराइरहेका थिए भने कोही आगामी अधिवेशनमा आफ्नो उमेदवारीबारे प्रचार गरिरहेका थिए । जापानमा टाँसी लामा र आइसिसी अध्यक्षमा भवन भट्टले फेरि दोहोर्याउने चर्चा पनि चलिरहेको थियो । एनआरएनए जापानका महासचिव बुद्धिराज घिमिरेलेलाई अवको अधिवेशनमा तपाईको उमेद्वारी के रहन्छ भन्ने जिज्ञासामा अहिले नै सार्वजनिक गर्दा चाँडो हुने जवाफ थियो।
एनआरएनए आइसिसी सदस्य डिलाराम कँडेल भने आगामी कार्यकालको बारेमा सोचिन सकेको बताउनुहुन्थ्यो । अर्का आइसिसी सदस्य केशर गिरी भने समयले बताउँछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो ।
सायद यसपालि जित्नकै लागि होला नागोयाका व्यवसायी गोविन्द्र श्रेष्ठ खुलेर आफ्नो उमेद्वारीको प्रचारमा लाग्नुभएको थियो। अर्का आइसिसी सदस्य ओम गुरुङ्ग भने अरुको प्रतिक्रिया बुझ्नमा नै व्यस्त देखिनुहुन्थ्यो ।
नेपाल फेष्टिवलका संयोजक तथा एनआरएनए एशिया प्यासिफिकका उप संयोजक पारशमणि पोखरेल अगाडी बढ्नपर्ने चर्चा पनि चलिरहेको थियो । कार्यक्रममा भेटिएका व्यवसायी सुरज काफ्लेका अनुसार काम गर्नेलाई सबैले साथ दिनुपर्छ । यत्रो कार्यक्रम पारशमणि पोखरेलको नेतृत्वमा सम्पन्न भयो उहाँ जस्तो मान्छे एनआरएनएमा आउनु पर्छ ।
एक लाखको हाराहारीमा नेपाली रहेको जापानमा सबै तह र तप्काका मानिसहरुलाई एनआरएनले समेट्न नसकेको ठूलै आवाज पनि यत्रतत्र सुन्न सकिन्थ्यो ।